Lalao sy fangatahana 7 maimaim-poana na miaraka amina fihenam-bidy lehibe hanombohana ny faran'ny herinandro (16 Janoary) | Vaovao IPhone
Manomboka herinandro vaovao ny anio; Manana asa dimy andro mialoha izahay, saingy, mba hampifaly anao amin'ity fahantrana ity, anio dia mitondra lalao sy fampiharana ho an'ny maraina ho an'ny iPhone sy / na iPad an'ireo karama aho nefa izao, raha maika ianao, Afaka mahazo maimaim-poana tanteraka ianao, na, farafaharatsiny, miaraka amin'ny fihenam-bidy mahaliana.
Saingy araka ny ampitandremanay hatrany dia aza adino fa hampanan-kery ireo fampiroboroboana rehetra ho hitanao etsy ambany ireo Fotoana voafetra, izany hoe, azoko antoka fotsiny fa miasa izy ireo amin'ny fotoana famoahana ity lahatsoratra ity, saingy tsy fantatray, miaraka amin'ireo fanilikilihana vitsy, mandra-pahoviana no hiasa izy ireo satria tsy ampitan'ny mpandrindra izany matetika. Noho izany, raha liana amin'ny lalao na rindranasa ianao dia maika fa araraoty ny fotoana.
4 Tungoo - Bubble mitsangana platformer mitsangana
5 Ny Fiakarana
6 Fitsaboana ara-tsaina IV
7 Textever - naoty fohy ho an'ny Evernote
Air-Photos dia fampiharana izay azonao atao jereo ny sary avy amin'ny iPhone na iPad mivantana amin'ny solosainao, amin'ny alàlan'ny Wi-Fi, ary tsy mila manao fampifanarahana mialoha. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy apetrakao ihany koa ny add-on AirPhotoServer amin'ny Mac anao, fitaovana iray izay maimaim-poana ihany koa azonao. eto.
Anisan'ireo mampiavaka azy indrindra, niavaka fa afaka mijery sary kely sy sary mivantana ao amin'ny tranokala Mac ianao, misintona sary, na misy fanohanana ho an'ny AirPlay sy AirPrint.
Ny Air-Photos dia manana vidiny mahazatra 2,99 euro, nefa, azonao atao maimaim-poana izany.
FotoMed dia fampiharana ara-pahasalamana tsy mety amin'ny hypochondriacs. Afaka miaraka aminy isika mitadiava fampahalalana momba ny fitsaboana amin'ny sary. Natolotry MedlinePlus, serivisy ao amin'ny Tranombokim-pirenen'i Etazonia izany.
Ny sasany amin'ireo asany lehibe indrindra dia:
Mikaroha fampahalalana momba ny fitsaboana amin'ny sary. FotoMed dia manolotra anao fitaovana fikarohana manokana ho an'ny fampahalalana momba ny fitsaboana, sary manokana momba ny fitsaboana, avy amin'ny tranonkala azo antoka.
FotoMed dia manampy anao hanaraka ny sarinao manokana sy ny sary hitanao eo amin'ny Internet.
FotoMed dia mamela anao hampitaha ny sarinao amin'ny sary ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana avy amin'ny loharanon-tranonkala azo antoka, na mampitaha ny sarinao manokana (toy ny toe-piainana) nalaina tamin'ny fotoana samihafa.
Ao anatin'ny FotoMed, azonao atao ny maka sary miaraka amin'ny fakan-tsarobidin'ny telefaona […] zoom in / out, rotate […] raha te hahita zavatra tsaratsara kokoa ianao. Azonao atao ny manohina sary iray hijerena azy mangarahara kokoa. Io dia ahafahanao mampitaha sary roa mifanindry.
FotoMed dia manana vidiny mahazatra 0,99 euro, kanefa, azonao atao maimaim-poana izany.
WebDisk avadiho ho "kapila mafy virtoaly" ny iPhone, iPad na iPod Touch-nao izay azonao idirana avy amin'ny Mac na PC browser anao hijerena sy / na hisintomana ireo rakitrao.
WebDisk dia manana vidiny mahazatra 0,99 euro, na izany aza, azonao atao maimaim-poana izany.
Tungoo - Bubble mitsangana platformer mitsangana
"Tungoo dia fitsangatsanganana mitsivalana tsy misy tohika miainga avy amin'ny tany ary miafara amin'ny sisin'ny habakabaka"; ny tanjonao dia ny mihinana boulety. ny lalao tsotra toy ny mampiankin-doha, ary koa mahazatra.
Tungoo Manana vidiny 5,99 euro mahazatra izy io, nefa, izao dia azonao atao maimaimpoana tanteraka izany.
"Mampiasa ny motera sary Unity3D ny Descent hampitana ny fahatsapana sy ny fahafenoan'izao tontolo izao. Hatsofoka ao anaty tantara tsy fantatra ianao, miankina aminao ny vokany. Ny ala mando any Amazon, ny efitra, ny zohy, Eropa, ireo toerana rehetra tsy maintsy resinao amin'ny herinao sy ny sainao ireo, satria tsy misy olona manampy anao ... »
Ny Fiakarana Izy io dia manana vidiny mahazatra 1,99 euro, kanefa, izao dia azonao atao izany miaraka amin'ny fihenam-bidy 50% amin'ny 0,99 Euros fotsiny.
Fitsaboana ara-tsaina IV
Mental Hopitaly IV dia manana vidiny 1,99 euro mahazatra, kanefa, izao dia azonao atao izany miaraka amin'ny fihenam-bidy 50% amin'ny 0,99 Euros fotsiny.
Fitsaboana ara-tsaina IV€ 0,99
Textever - naoty fohy ho an'ny Evernote
Textever dia fampiharana izay mamela anao mamorona haingana sy mora, manova ary mandefa ny naotinao fiaramanidina ahafahanao "manampy boaty, sary, daty, fotoana, fampahatsiahivana, bala, marika ...", na amin'ny maody ivelan'ny seranana aza.
Izy io dia mifandrindra eo anelanelan'ny fitaovanao rehetra amin'ny alàlan'ny Evernote, izay ahafahanao manafatra ireo naotinao.
Textever - naoty fohy ho an'ny Evernote Izy io dia manana vidiny mahazatra 4,99 euro, kanefa, izao dia azonao atao izany miaraka amin'ny fihenam-bidy 80% amin'ny 0,99 Euros fotsiny.
Textever - naoty fohy ho an'ny Evernote€ 4,49
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao sy fampiharana 7 maimaimpoana na misy fihenam-bidy betsaka mba hanombohana ny herinandro ho fanombohana tsara (16 Janoary)